အရွယ်ရောက်သူများနှင့်ကလေးများအတွက် Ear Washing & Earwax Remover ကိုဝယ်ယူရန် - အခမဲ့သင်္ဘောတင်ခနှင့်အခွန်ကောက်ခံခြင်း WoopShop®
အရွယ်ရောက်သူများနှင့်ကလေးများအတွက်နားဆေးနှင့် Earwax ဖယ်ရှားစက်
$14.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $29.99
မှစ. သင်္ဘောများ ပြင်သစ် တရုတ်နိုင်ငံ ၾသစေတးလ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ စပိန် ပိုလန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အီတလီ
အရောင် အပိုင်း အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည်
ပြင်သစ် / အပိုင်း တရုတ် / အပြည့်အဝထား သြစတြေးလျ / အပိုင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် စပိန် / အပိုင်း ပိုလန် / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း / အပိုင်း ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ အပိုင်း ပိုလန် / အပိုင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ / အပိုင်း တရုတ် / အပိုင်း ပြင်သစ် / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် အီတလီ / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် ယူနိုက်တက်စတိတ် / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် စပိန် / အပြည့်အဝသတ်မှတ်မည် သြစတြေးလျ / အပြည့်အဝထား အီတလီ / အပိုင်း
အရွယ်ရောက်သူများနှင့်ကလေးများအတွက်နားဆေးနှင့် Earwax ဖယ်ရှားခြင်း - ပြင်သစ် / အပိုင်း backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရွယ်အစား: အကြောင်းကို 22 * ​​18 * 6
အန္တရာယ်ကင်းပြီးထိရောက်မှု - နားဖယောင်းအဝတ်လျှော်စနစ်၊ ၎င်းသည်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောတူညီသောပုံစံနားနားဆည်စနစ်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကဝယ်ယူပြီး၎င်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုရန်!
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည် - earwax ဖယ်ရှားခြင်းသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိပြီးဖယောင်းတည်ဆောက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ရေနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်လိုအပ်သည်။ သင်အိမ်၌၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်း - အစွန်အဖျားနေရာတွင်အစားထိုးနိုင်သည်၊ မတူညီသောလူများ၏ကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
All-Inclusive Kit - ကျွန်ုပ်တို့၏နား ၀ တ်ဆင်သည့်စနစ်တွင်နားအ ၀ တ်ပုတ်ဖြန်းပုလင်း၊ နားတောင်း၊ ရော်ဘာမီးသီး၊ အပိုအကြံပြုချက် ၅ ခုပါရှိသည်။
နားဖယောင်းဖယ်ရှားရေးကိရိယာသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးထိရောက်သောနားကြပ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာဖြစ်ပြီးလူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်အရည်အသွေးမြင့်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော silicone tubing များပါဝင်ပြီးအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
အဆင့် ၁ - နားကိုဆည်မြောင်းပုလင်းတစ်လုံးကို ၃% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်လေးပိုင်း ခွဲ၍ အလွန်ပူနွေးသောရေနှင့်ဖြည့်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကရိုးရိုးလေးရေပူဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။
အဆင့် ၂ - Luer lock fitting သို့အဝတ်လျှော်ရန်အချက်များအနက်မှတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပါက၎င်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာသောအကာအကွယ်ပြီးနောက်နားအ ၀ တ်လျှော်ပိုက်၏အဆုံးတွင်ရှိသည်။
အဆင့် ၃ - နားရွက်ထဲသို့ထည့်ထားသောအစွန်အဖျားဖြင့်ထိုင်။ ထိုင်ပါ။ ညင်ညင်သာသာစုပ်ပါ။
မှုတ်ဆေးနှင့်အတူ 1 x နား Cleaner ပုလင်း
1 x Mini မီးသီးပြွတ်
1 x ကိုနားဝှမ်း
1 က x ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Tube
5 x အပိုဆောင်းသိကောင်းစရာများ
1 x ကိုသန့်ရှင်းတဲ့ Brush
အားလုံးအလုပ်လုပ်သော်လည်းရေပူဖြင့်သာအသုံးပြုသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်သုံးရန်ကြိုးစားပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေမိမိတာဝန်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တူညီသော pack ကို Amazon ၌ရောင်းချခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ချိန်ပိုကြာနိုင်သော်လည်းကန့်သတ်ချက်အတွင်းသာရှိသည်။
နှစ်ပတ်အစာရှောင်သည် ငါတို့မှာအကုန်လုံးရှိတယ်။ Oprah-unfollow